अनुसन्धान र डिजाईन र इन्जिनियरि ofको क्षेत्रहरू बीच के भिन्नता छ? -कम्पनी न्यूज-शेन्जेन नोबल स्मार्ट निर्माण प्रौद्योगिकी कम्पनी लिमिटेड
R&D र डिजाईन र ईन्जिनियरि ?को क्षेत्रहरू बीच के भिन्नता छ?
समय: 2018-05-05 हिट्स: 2
R&D र डिजाईन र ईन्जिनियरि ?को क्षेत्रहरू बीच के भिन्नता छ? यो उत्तरको प्रकार लामो भयो किनकि यो एक आधारभूत प्रश्न हो।
त्यहाँ केहि ओभरल्याप छ, तर आर एन्ड डी कम्पनीहरू सामान्यतया विचारबाट प्रोटोटाइपमा अवधारणा लिन सेट अप हुन्छन्। सामान्यतया ती प्रोटोटाइपहरू, यदि तिनीहरू आर एण्ड डी कम्पनीले "पायलट निर्मित" गर्दछन् भने पनि डिजाइनलाई उत्पादनयोग्य र बिक्रीयोग्य बनाउन अझ उन्नत औद्योगिक इन्जिनियरि needको आवश्यक पर्दछ, र प्राय: डिजाइन र ईन्जिनियरि company कम्पनीले उत्पादनलाई अझ आकर्षक बनाउन कस्मेटिक संवर्द्धन पनि थप गर्दछ। , स्टक गर्न सजिलो, वितरण गर्न सजिलो, र सबै सरकारी नियमहरूको पालनामा।
ठूला कम्पनीहरूको आर एंड डी सेक्सन वा एउटा छाता अन्तर्गत डिभिजनहरू छन्, तर प्रक्रिया यस्तै हुनेछ जुन मैले यहाँ वर्णन गरेको छु त्यसरी नै "अर्को कम्पनी" को सट्टा "अर्को डिभिजन" सोच्नुहोस्।
मसँग एउटा सानो मर्मत अनुभागको साथ एक आर एन्ड डी कम्पनीको स्वामित्व थियो। हामी थोरै परिमाणमा निर्माण गर्न सक्दछौं, तर हामी एउटा डिजाइन र ईन्जिनियरि company कम्पनी राख्छौं जब हामी ठूलो परिमाणमा उत्पादन गर्न तयार हुन्छौं। हामी के गर्छौं हामीले जसलाई "पायलट निर्माण" भन्यौं तर यो वास्तवमै "प्रोटोटाइप पायलट निर्माण" थियो। हाम्रो काम भनेको उत्पादलाई कार्यशील र निर्माणयोग्य बनाउनु थियो।
एउटा डिजाइन इञ्जिनियरले बुझ्नु पर्छ कि कसरी वाणिज्यिक रूपमा उपलव्ध अवयवहरूलाई सम्मेलनमा समाहित गर्ने, सामग्रीहरूको बिल पूर्ण गर्ने, र उपकरण बनाउने सबै सरकारी नियमहरूको पालना कसरी गर्ने। एक अनुसन्धान र विकास इञ्जिनियरले यी चीजहरूलाई पनि थाहा पाउनुपर्दछ तर विधानसभाको कार्यात्मक आवश्यकताहरूमा बढी केन्द्रित हुन्छ।
यहाँ यसले कसरी व्यावहारिक रूपमा काम गर्दछ भन्ने कुरा छ: जब म विधानसभा विकास गर्न आर एण्ड डी गर्दैछु, जब सम्म म के गर्छु थाहा हुँदैन प्रत्येक कम्पोनेन्टको लागतको बारेमा त्यति चिन्ता गर्दिन। त्यसो भएपछि मसँग काम गरिरहेको उत्पादन भएपछि म फेरि विधानसभा मार्फत जान्छु र व्यावसायिक रूपमा उपलब्ध भागहरूको सुझाव दिनेछु। मैले निर्दिष्ट गरेको भागहरूको प्रयोग गरेर सानो म्यान्च रनको विकास गरेर पनि म आफ्नो डिजाइनको परीक्षण गर्न सक्छु। म सामान्यतया यसलाई "पायलट निर्माण" भन्छु तर वास्तवमै यो अनुसन्धान र विकास प्रक्रियाको अंश मात्र हो।
जब डिजाईन ईन्जिनियरले पाउँदछ हामी भेट्नेछौं र सम्पूर्ण सामग्रीहरू बिलमा पार गर्नेछौं, हरेक घटकलाई बिडिंग गरेर। उसले थाहा पाउनेछ कि कुन ROHS, CE, UL वा अन्य regs सुसंगत छन्, कुनलाई थप अनुमोदन आवश्यक पर्दछ, र कसरी गर्छ भने अगाडि बढ्ने। यदि मैले मैले छनौट गरेको भन्दा फरक चयन गरेको खण्डमा म के सुझाव दिन सक्छु भनेर सल्लाह दिनेछु। यस प्रक्रियाको अन्तमा हामीसँग सामग्रीको बिल हुनेछ। त्यसपछि हामी ब्रान्डि,, लेबलिंग, निर्देशन सेट, प्याकेजि,, वितरण, बार कोड, QR कोड, आदि मार्फत जान डिजाइनरहरू, मार्केटरहरू, शिपिंग, प्याकेजि design डिजाइन, इत्यादिहरूसँग भेट्नेछौं। यी प्रत्येक शाखाहरूको आफ्नै नियमहरूको सेट छ। उनीहरू कसरी गरिरहेछन् भन्ने कुराको संचालन गर्दै। ती सबै शाखाहरू डिजाइन ईन्जिनियरको कम्पनीमा छन् तर R&D कम्पनीमा आवश्यक छैन।
त्यस बिन्दुमा तपाईले निर्माण ईन्जिनियर ल्याउनुहुनेछ। तिनीहरूले डिजाईन ईन्जिनियरको उत्पादन लिन्छन्, र उत्पादनहरू बजारमा प्रवेश गरेपछि अर्डर र निरीक्षण गर्ने भागहरू, निर्माण, शिपिंग, र गुणस्तर नियन्त्रणको लागि चरणहरू र आवश्यकताहरूको पालना गर्दछन्।
उत्पादन ईन्जिनियरिलाई यी सबै विषयहरूको आवश्यकता छ र प्रत्येक फरक छ। जब तपाईं उत्पादन विकास गर्नुहुन्छ त्यहाँ त्यहाँ अनुशासनहरूको बीचमा ह्यान्ड अफहरू छन् तर त्यहाँ सामान्यतया एक निरन्तर संवाद हुन्छ र अनुसंधान र विकास ईन्जिनियरहरू, डिजाइन ईन्जिनियरहरू, र निर्माण ईन्जिनियरहरूका बीच उत्पाद जीवनभर अन्तर्क्रियाको लागि आवश्यक हुन्छ।
अघिल्लो: घर कपाल हटाउने उपकरणहरूको लागि OEM / ODM को अर्थ के हो जुन उद्योगमा व्यक्तिहरू अक्सर भन्छन्？
अर्को: परियोजना व्यवस्थापन भनेको के हो?